Sawirro: Midowga Musharaxiinta oo Rooble u gudbiyey liiskii laga sugayey – Benaadir News Network
Sawirro: Midowga Musharaxiinta oo Rooble u gudbiyey liiskii laga sugayey
Muqdisho (Benaadir News) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa galabta xafiiskiisa kula kulmay xubno ka socday Golaha Midowga Musharaxiinta, kuwaas oo warbixin ka siday golaha.
Xubnahaan oo kala ahaa Madaxweyneyaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ra’iisul wasaaraha u gudbiyey liiska xubnaha ay cabashada ka qabaan ee ku jira guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo dowlad-goboleed.
Heshiiskii doorashada ee dhawaan lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho ayaa dhigayey in musharaxiintu ay soo gudbiyaan xubnaha ku jira guddiyada doorashooyinka oo ay ku tuhmayaan in aysan dhaxdhaxaad aheyn.
Inkastoo aan la shaacin magacyada iyo tirada xubnahan, hadana qiyaastii 20 qof oo ku jira guddiyadan ayaa la sheegay inay liiskooda gudbiyeen Golaha Midowga Musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya.
Benaadir News ayaa maanta baahisay in musharaxiintu ay qorsheynayaan gudbinta liiska xubnahaas, waxaana la sheegay inay la wareegi doonan guddiga heerka Wasiirro ah oo uu shalay magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, kuwaas oo loo xil saaray xaqiijinta caddeymaha xubnahan cabashada laga keenay, iyagoo marka ay soo tala bixiyaan la wadaagi doona Ra’iisul Wasaaraha.
Previous Kenya oo ku hanjabtay tallaabo cusub oo la xiriirta duulimaadyada Soomaaliya
Next Sawirro: Qorshaha kulanka siyaasiyiinta ugu miisaanka culus Koonfur Galbeed ee Muqdisho
28 seconds ago Webmaster
LIVE: Vaccine manufacturers praise dynamic leadership of Modi, says PMO
NCAAW: South Carolina Gamecocks, UConn Huskies are big favorites